Hikkaduwa dia tanàna fialantsasatra ao Sri Lanka " Journey-Assist - tanàn-dehibe any Sri Lanka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Hikkaduwa
Sarintan-javatra mifampizara an'i Sri Lanka
Sarintany sy fizarana tora-pasika any Sri Lanka (interaktif)
Faritra sy fivarotana ao Sri Lanka
15 martsa, 2020
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Hikkaduwa
Ny toetrandro sy ny toetr'andro ankehitriny + vinavina
Inona no tokony hatao any Hikkaduwa
Nightlife any Hikkaduwa
Ny tanàna fialantsasatra Hikkaduwa dia miorina eo amin'ny morontsiraka andrefana. Sri Lanka. Halaviran'ny seranam-piaramanidina. Any amin'ny 128 km no misy an'i Bandaranaike. Hikkaduwa dia ao amin'ny faritr'i Galle, any atsimon'i Sri Lanka. Ny tanàna dia miorina eo amoron'ny ranomasimbe, raha ny marina - eo amin'ny saikinosy, izay amoron-drano miolikolika izay miforona mankany amin'ny farihy.
Mahatratra 100 XNUMX eo ny isan’ny mponin’i Hikkaduwa, izay imbetsaka noho ny isan’ireo mpizahatany izay mipetraka ao an-tanàna amin’ny fotoana rehetra. Eto, ilay antsoina hoe. fizahan-tany fonosana avy any amin'ireo firenena USSR teo aloha, izay namaritra ny fisian'ny mpivarotra sy ny fako kely amin'ny faritany amoron-dranomasina.
Hikkaduwa ao amin'ny sari-tanin'i Sri Lanka
Misy fivarotana lehibe maromaro any Hikkaduwa izay mivarotra sakafo. Ny karazany dia tsy azo antsoina hoe malalaka, fa ny zava-dehibe rehetra dia azo jerena. Ny lehibe indrindra amin'izany dia ny tanànan'ny Sandagiri Food.
Ao akaikin'ny Hotely Citrus no misy azy. Toeram-pivarotana kely no misy eo anilan'ny arabe, fa ny safidy kosa dia somary kely kokoa ary ny rano mamirapiratra sy rano ihany, mofomamy ary vokatra vita amin'ny semi-vita. Ireo mpizahatany manofa trano miaraka an-dakozia dia afaka mandeha mankany Galle amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana.
Hikkaduwa dia iray amin'ireo mandroso indrindra amin'ny resaka fotodrafitrasa trano fandraisam-bahiny Sri Lankan. Misy trano ampy tsara ho an'ny tsiro sy teti-bola tsirairay, ao anatin'izany ny safidy teti-bola maro. Na aiza na aiza ny fananganana ny kaompania, ary ny ankamaroany dia manana menu mensianina amin'ny teny Rosiana. Toerana ho an'ny mpizahatany (anisan'izany ny firavaka, dite sy souvenir), masoivoho fitetezana, toerana fividianana bisikileta sy mpivarotra sandam-bola ary mpivarotra vola dia hita ao amin'ny habetsaka ampy. Misy toeram-pivarotana lehibe, tsena, ATM ary banky.
Currency Exchange in Hikkaduwa
Aiza hividy toaka in hikkaduwa
Ny alikaola dia amidy any amin'ny fivarotana manokana, izay misy 3 ao Hikkaduwa: any amin'ny faritra avaratra amin'ny tanàna, amin'ny faritra afovoany akaikin'ny Hikka Trans Hotel, ary koa akaikin'ny Hotely Citrus amin'ny trano tokana miaraka amin'ny fivarotana lehibe Sandagiri. Divay, vodka, arak, labiera sy zava-pisotro misy alikaola hafa azo amidy tokana eto.
Hikkaduwa dia miavaka amin'ny toetrandro mafana be sy miaraka amin'izay. Ny isotherm isan-taona eto dia ao anatin'ny + 28 ... + 31, ary amin'ny volana samihafa dia mitovy ny mari-pana, tsy misy fiovana lehibe. Ny mari-pana amin'ny ranomasina dia miova ihany koa mandritra ny taona, eo amin'ny + 27 ... + 29.
Rehefa mety no fotoana tsara indrindra mankany Hikkaduwa. vanim-potoana
Ny fotoam-pizahan-tany amin'ity fizarana ity dia manomboka amin'ny volana Novambra ary mifarana ny volana aprily. Io vanim-potoana io dia tsara indrindra amin'ny fitsidihana an'i Hikkaduwa ary marihin'ny toetrandro ratsy indrindra. Ny hafanana isan'andro amin'ny vanim-potoana amin'io dia +28. Ankoatr'izany, ny haavon'ny rotsakorana dia mihena be.
Ny fotoanan'ny orana eto manomboka ny volana Mey ary mifarana amin'ny Oktobra. Ireo volana ireo dia aseho amin'ny oram-be mivatravatra, izay toa tadin'ny kotrokorana matetika. Ankoatr'izay, matetika ny tafio-drivotra amin'ny ranomasina amin'izao fotoana izao. Ny vanim-potoana mafana indrindra dia ny volana Oktobra sy Mey. Mety orana aorian'ny 12 ora. Amin'ny fahavaratra, matetika ny orana amin'ny tolakandro.
Weather in Hikkaduw anio + forecast
Ity ambany ity dia ahitanao ny sarintanin'ny toetr'andro ao Hikkaduwa. Afaka manova takelaka ianao ary mahazo fampahalalana momba ny karazana rivotra, onja, orana, kotrokorana sy mari-pana. Eto ambany ny sarintany azonao jerena ny vinavinan'ny toetrandro mandritra ny andro maromaro mialoha.
Azonao atao ny mijery ny tsenan'ny trondro eo an-toerana, izay eo amoron'ny seranan-tsambo artifisialy. Ny ora fanombohana isan'andro amin'ny varotra dia 5 ora. Amin'ny 9 ora, mazàna dia lafo daholo ny entana tsara ho an'ny trano fisakafoanana. Raha te hanandrana trondro fotsiny ianao, fa koa mba hahatratra azy dia afaka mandeha an-tongotra mankany Dodanduwa ianao - tanàna iray tsy lavitra an'i Hikkaduwa. Ao amin'ny seranan-tsambo kely fanjonoana dia manofa trano catamarans, ahafahanao manjono mandritra ny 2 na 3 ora amin'ny maraina na amin'ny hariva.
Ny trano fisakafoanana rehetra dia manolotra lobster vaovao na udid jumbo goavambe, izay mifanaraka tsara amin'ny labiera srieka ofka Leon.
Ao amin'ny Hikkaduwa koa dia misy tempoly bodista, farihy mahafinaritra, malaza amin'ny vorona, trano fisotroana ary disko.
Torapasika any Hikkaduwa
Ao Hikkaduwa, ny farihy mitovy anarana aminy, izay voahodidin'ny toetra tropikaly mahafinaritra, ary ny morontsiraka Narigama mahafinaritra dia mendrika ny hojerena. Ireo mpizaha tany mitsidika ity toeram-pialantsasatra ity dia tsy dia liana firy amin'ireo tsangambato ara-kolotsaina sy ny manintona eo an-toerana. Tian'izy ireo ny torapasika sy ny safidy fialamboly ara-panatanjahantena. Tsy misy afa-tsy tora-pasika roa ao Hikkaduwa - Narigama sy Hikkaduwa Beach.
Reniranon'i Narigama. Toerana tsara hihaona amin'ny masoandro
Hikkaduwa Beach dia moron-dranomasina feno fasika feno hotely, bara ary fivarotana. Ny fanambanin'ny torapasika dia be vato. Noho izany, ny onja misosa mankany amoron-dranomasina dia tsy misy fasika. Milomano eo amin'ilay toerana akaikin'ny hotely Hikka Trans ny mpizaha tany. Saika tsy misy onja eto amin'ity toerana ity.
Narigama dia torapasika somary malalaka miaraka amin'ny fidirana malefaka amin'ny rano. Tonga eto ny sera, satria ny tanànan'i Hikkaduwa dia tsy ao anaty rano feno tanteraka. Ny haran-dranomasina kosa dia mampihena ny onja. Ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina dia novolavolaina tsara.
Mandria amoron-dranomasina dia ahafahanao milomano ao amin'ny Ranomasimbe Indianina amin'ny fialan-tsasatra, mandentika amin'ny taratry ny masoandro mafana. Na izany aza, ao Hikkaduwa dia misy ny fepetra rehetra amin'ny fanatanjahantena karazana rano: snorkeling, diving, surf. Na amin'ny morontsiraka Hikkaduwa aza dia misy sekolim-pianarana maromaro, izay ianaran'ny olon-dehibe sy ny ankizy ny fototr'ity fanatanjahan-tena ity. Ny lesona iray avy amin'ny mpampianatra iray ao an-toerana dia mitentina 2 000 rupiyes. Azonao atao ihany koa ny mahita ivotoerana fisitrandrahana miaraka amin'ireo mpampianatra mpikaroka. Ny ivon-toerana tsirairay ireo dia tsy miasa afa-tsy amin'ny vanin-taona mafana (Oktobra-Aprily).
Fampahalalana tao Hikkaduwa
Ny toerana faharoa malaza indrindra eo amin'ireo mpizahatany aorian'ny morontsiraka ao an-tanànan'i Hikkaduwa dia ny farihy, izay antsoina koa hoe Hikkaduwa ary manintona mpizahatany maro miaraka amin'ny fahafaha-mandeha amin'ny rano milamina, mandinika am-pitoniana ny gadon'aina tsy dia maika any Sri Lanka. Ireo nosy maro izay eo amin'ny farihy dia mamela ny mponina eo an-toerana hamboly kanelina, voanio, akondro ary sakamalao. Ao amin'ireo tohodrano miorina eo amoron'ny farihy dia misy harato izay itomboan'ny makamba. Ny iray amin'ireo nosy eto amin'ity farihy ity dia toerana fanaovana tranombakoka mampiseho zavakanto eo an-toerana. Ny farihy dia fitoerana masina.
Fandresena, sy fanoratana ny vatohara ao Hikkaduwa.
Misy haran-dranomasina lehibe manamorona ny moron'ny tanàna. Ity toerana ity dia manana anarana manan-tantara "Coral Gardens", satria teo aloha dia nisy haran-dranomasina marobe teny akaikin'ny morontsiraka, voahodidin'ny trondro tropikaly marevaka, hazom-baravarana, hedgehogs ary biby hafa ao amin'ny ranomasina.
Indray mandeha, ny vatohara amin'ny loharanon-karena voajanahary dia afaka nifaninana na dia ny Ranomasina Mena aza. Na izany aza dia nanova ny tsunami tamin'ny 2004 ny zava-drehetra, ka anio dia afaka mahita ny sisa tavela amin'ny hakanton'ny very ianao, izay manararaotra mpandraharaha avy amin'ny sehatry ny fizahantany.
Tempolin'i Shinigama Muhudu Viharaya (Seenigama Muhudu Viharaya)
Eo akaikin'ny fidirana amin'ny tanànan'i Hikkaduwa no misy ny vohitra Sinigama. Eo no ahitanao ity tempoly ity. Ny anarana "Sinigama" amin'ny Sinhalese dia midika hoe "tanàna siramamy" ("gama" - tanàna, "manga" - siramamy).
Tempolin'i Shinigama Muhudu Viharaya
Ity tempoly ity dia manintona tokoa ho an'ny mpizaha tany ary hajain'ny mponina eo an-toerana. Izy io dia natokana ho an'i Devillo andriamanitra, izay miaro ny faritany atsimo andrefana, manohana ireo mpanjono sy mpamily. Nandritra ny iray volana dia manome vola 50 kilao eo ho eo ho an'ny tempoly ny mpitsidika. Isam-bolana, puja dia atao ao amin'ny tempoly - lanonana manokana amin'ny fanompoana andriamanitra.
Ny finoana ao an-toerana dia milaza fa ao amin'ny tempolin'i Shinigama ny olona iray izay niharan'ny fikomiana tsy ara-drariny dia manana fotoana hangatahana ny andriamanitra ho valifaty amin'ireo nanao meloka, ary azo antoka fa azony. Ny olona sasany dia mampiasa toerana masina toy izany hanozona ny fahavalony. Mba hahazoana fangatahana famaliana, niresaka tamin'andriamanitra Deviyo, mba hanatanterahany azy, dia tsy maintsy tonga any amin'ilay nosy ianao, ary mitodiha any amin'andriamanitra any. Ekena amin'ny ankapobeny fa noho io antony io, ny faritany izay tanterahana ny ozona dia latsaka avy amin'ny tontolon'ny bodista, koa tsy mandoto azy io. Rehefa avy manontany an'Andriamanitra ianao amin'izay ilainao, dia tokony hanao fombafomba ianao izay mitaky ny fikosehana tsaramaso amin'ny vato manokana.
Tsangambato ho an'ireo niharan'ny tsunami Honganji Vihara
Tsy lavitra ny tempoly etsy ambony, misy trano fahatsiarovana namboarina taorian'ny tsunami tamin'ny Desambra 2004 namono olona manodidina ny 35 tany Sri Lanka.
Tsangambato ho an'ireo iharan'ny vidiny any Hikkaduwa
Io toerana io dia voafidy ho an'ny tsangambato noho ny voina nitranga tao metatra vitsivitsy avy teto ny 26.12.2004 desambra 1. Nisy onjan-tsunami iray nandro ny lamasinina iray avy tao amin'ny lalamby, izay nisy olona 700 teo ho eo. Anisan'ireny ny mpizahatany avy any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Nisy sary sokitra Buddha 18,5 metatra mijoro eto andrefana ny ranomasina dia naseho an'i Sri Lanka tany Japon. Ilay tanàna mpifanolo-bodirindrina ao Tellvatta dia lasa toerana misy ny tranoben'ny tsunami miaraka amin'ny fampandrenesana sary. Ity tranom-bakoka ity dia tsy mendrika ny mitsidika olom-pirenena be loatra, satria ny sariny dia mety hiteraka fihetseham-po mahery vaika.
Noho ny fizahan-tany fonosana novolavola, Hikkaduwa dia manana fiainana andavan'andro. Saingy tokony ho ao an-tsaina fa tsy afaka manantena eto ny sakany izay, ohatra, i Pattaya afaka mirehareha. Misy klioba maromaro ao Hikkaduwa miaraka amin'ny laza tsy mitovy. Ireto dia Blue Moon, Mambo's, The Vibration Music Bar ary Funky de Bar. Miasa hatramin'ny 01.00 izy ireo.
Ampirisihina mafy izy io (indrindra ho an'ireo mpizahatany tanora) hisorohana ny fizahan-tany sy ny tsy fahampiana fizahan-tany, indraindray manambara ny zava-misy iainana amin'ny fandinihana. Ny tokony ho izy manokana dia mila mitondra tena toy ny hoe anaty takelaka tsy mahazatra amin'ny tanàna niavianao ianao, satria tsy dia mahalana loatra ny fifandonana amin'ny mponina eo an-toerana amin'ireny toerana ireny.
Hikkaduwa dia miavaka amin'ny fotodrafitrasa somary tsara. Avy any Colombo dia mila adiny 2 eo vao tonga eto. Misy làlam-pirenena 2 mandehandeha mamaky ilay toeram-pialofana - E01 sy A2. Misaotra azy ireo, azo atao ny tonga amin'ny toerana fohy any amin'ny firenena amin'ny fotoana fohy.
Ny ankamaroan'ny taxi ao Hikkaduwa dia fiara fitateram-bahoaka ho an'ny mpandeha 8. Noho io antony io dia tsy lafo ny dia. Ohatra, ny dia avy any Hikkaduwa mankany Galle dia mitentina 1 500 ropia, mankany Colombo - 3 000 rupees. Hikkaduwa mihitsy dia azo aleha amin'ny lamasinina sy bus avy any Galle sy Colombo. Misy ihany koa fiaran-dalamby miainga avy any Kandy isan'andro. Ny tapakila amin'ny kalesy kilasy faha-2 dia mitentina 430 ropia. Maharitra 6 ora ny dia.